Farxiya Kabayare: Ciyaartoyga Ay Xiirashada Kaga Dayato
HomeWararka MaantaFarxiya Kabayare: Ciyaartoyga Ay Xiirashada Kaga Dayato
24/12/2016 Abdiwahab Ahmed
Fannaanada caanka ah ee Farxiya Kabayare ayaa toddobaadkan mar kale qabsatay indhaha taageereyaasha fankeeda kaddib markii ay magaalada Nayroobi ee waddanka Kenya ku qabatay Bandhig-faneed ay dad badan ka qayb-galeen, kaas oo ay madaxeeda u xiirtay qaab lala yaabay.
Kabayare ayaa madaxeeda labada dhinac ka xiirtay dhamaan timihii ku yaallay, waxaanay la hadhay oo kaliya timaha madaxa qaybta sare, taas oo keentay su’aalo la xidhiidha hab-dhaqanka inan soomaaliyad ah oo sidan madaxeeda ka dhigtay.
Dadka fanka iyo ciyaarahaba daawada ayaa falan-qayn kala duwan ka bixiyey madaxa xiiran ee fannaanada Farxiya Kabayare, kuwaas oo ku mesaalay ciyaaryahanno caan ah oo ay tilmaameen in madaxeedu shabaho.
Habeenkii ay bandhig faneedka qabatay maalintii ku xigtayba, waxa baraha bulshada lagu baahiyey sawirro laysku barbar dhigayo xiirashada Fannaanad Kabayare iyo Ciyaarayahannada Mario Balotelli, Artuo Vidal, Sharaawi iyo kuwo kale.
Maaha markii ugu horreysay ee Farxiya Kabayare ay sidan oo kale u xiirato, dadkana ugu soo bandhigto, hase yeeshee, waxay hore uduubtay heesta caan baxday ee DHAKAC-DHAKAC, taas oo ay madal dad badan joogaan ka qaadday iyadoo dhinacyada xiiran.
Franck Ribery Oo Seegaya Kulanka Manchester City Iyo Robben Oo Shaki Ku Jiro